Gold v Satyamev Jayate: Shabakada BOI oo sheegtay loolanka hal dhinac inuu yahay Gold ayaana awood badan! | Filimside.net
Home » Box Office » Gold v Satyamev Jayate: Shabakada BOI oo sheegtay loolanka hal dhinac inuu yahay Gold ayaana awood badan!
Gold v Satyamev Jayate: Shabakada BOI oo sheegtay loolanka hal dhinac inuu yahay Gold ayaana awood badan!
Arbacada dambe (15 Aug 2018) waa maalinta xurnimada Hindiya waxaana Boxoffice-ka ku hardami doonaan filimada Gold iyo Satyamev Jayate ayadoo mid walbo uu doonayo inuu ka faa’iideesto fasaxa qaran ee jiro.
Balse shabakada Boxoffice India (BOI) ayaa maqaal hordhac ah soo daabacday kuna ogaatay in Akshay Kumar filimkiisa Gold in badan Boxoffice-ka fagta hore kaga awood badnaan doono John Abraham filimkiisa Satyamev Jayate.
Waxaa la ogaaday in 70% tiyaatarada daqliga badan laga helo Multiplex filimka Gold la saari doono halka kooxda cajaladaha qeybiyaan iyo kuwa tiyaatarada iska leh filimka Satyamev Jayate u reebeen 30%.
Sidoo kale tiyaatarada Single Screens ee dadka muruq maalka ah iyo kuwa dabaqada dhexe u daawasho tagaan Gold ayaa ku tiro badan inkastoo filimka Satyamev Jayate fariintiisa Action tahay oo uu halkaas si wacan kaga gadmi karo,
Akshay Kumar waa atooraha afaraad ee Bollywood-ka ugu awooda badan halka John Abraham uu yahay atooraha 12-aad ee Bollywood-ka ugu awooda badan sidoo kalena labada filim Gold iyo Satyamev Jayate isku saameyn ma ahan dhanka hadal heynta taasi ayaa sababi doonto fagta hore in Akshay Boxoffice-ka ku awood badnaado.
Akshay Kumar wuxuu doonayaa sanadkii sedexaad oo xariir ah inuu todobaadka xurnimada Hindiya filim HIT dhameestiran ah la imaado asigoo 2016 la yimid Rustom wuxuuna markaas Boxoffice-ka ku garaacay Hrithik Roshan sidoo kalena 2017 wuxuu la yimid filimkii Toilet Ek Prem Katha mana jirin cid tiyaatarada la saaratay.
Sidaa darteed Gold wuxuu noqon doonaa dooqa kowaad ee daawadayaasha madaama tiyaatarada isaga loo badiyay sidoo kalena u badan tahay 3000 tiyaatar ka badan in la saari doono halka John filimkiisa Satyamev Jayate isagana 2000 tiyaatar ku dhawaad la saari doono laakiin tiyaatarada daqliga badan laga helo Akshay ayaa carbuuntay.
3 Responses to Gold v Satyamev Jayate: Shabakada BOI oo sheegtay loolanka hal dhinac inuu yahay Gold ayaana awood badan!
Ustaaad Zaki filimki heer dool dib miya lo dhigay waa ayada jonh iyo akki bas Lee is haayaane
Haa filimka reer Deol dib ayaa loo dhigay 31-da bishan ayaa tiyaatarada la saarayaa.
Gold waa falim Sports Ku saabsan dunida Manta aad ayaa loga xiseyaa Sports marka ilama aha in glod iyo akki in uu jonh u Bar bardhigi karo